Measurementေ (ကျာက်ကပ်ရောဂါအတွက် အပ်စိုက်ရမည့် နေရာများ_ | Moe Naymin
Measurementေ (ကျာက်ကပ်ရောဂါအတွက် အပ်စိုက်ရမည့် နေရာများ_
ပုံတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း ဘီအယ်(လ်) ၂၃ သည် ခါးစစ်ရိုး၏ တစ်ဘက်တစ်ချက်စီတွင် ရှိပါသည်။ အတိုင်းအတာအားဖြင့် ခါးစစ်ရိုးမ၏ ၁.၅ cun အကွာအဝေးရှိ ခါးစစ်ရိုး နံပါတ် ၂ ဘေးတွင် ရှိပါသည်။ ခါးစစ်ရိုး နံပါတ် ၂ကို ခါးနှင့် တင်ပါးစပ်နားရှိ အမြင့်ဆုံးနေရာဟု အကြမ်းမျဉ်း မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။
အပ်စိုက်ပုံ။ ။ ၁ သို့မဟုတ် ၁.၅ cun အစောင်း သို့မဟုတ် တည့်တည့်
အကျိုးပြုပုံ ။ ။ ကျောက်ကပ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ yang charaka စီးဆင်းမှု မှန်စေခြင်း၊ ကျောက်ကပ်၏ yin ကို အဟာရပေးခြင်း၊ ဆီးအသွားအလာမှန်စေခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ကြီးသူများအတွက် ကျောက်ကပ်ပုံမှန်အရွယ်အစားရောက်စေခြင်း၊ မျက်စိနှင့်နား ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ခါး ရောဂါ သက်သာစေခြင်း၊ မျိုးပွားအင်္ဂါနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါအချို့ကို ကောင်းမွန်စေခြင်း။
Bl-23 Kidney Shu
1.5 cun latral to the lower border of the spinous process of the second lumbar vertebra (l2)
located at the visible highest point of the paraspinal muscles.
Direction- Oblique or perpendicular insertion 1 to 1.5 cun
Tonifies the kidney and fortifies yang
Indications- Oedema, difficulty in urination,enuresis, thirsting disorder with frequent urination, blood in the urine, seminal emission, seminal emission with dreams,urine containing semen, impotence, Pain of genitals, irregular menstruation,emaciation in women due to sexual intercourse, leucorrhoeam red and white leucorrhoea, diarrhoea, cold vomitting, chronic dyspnoea and cough,asthma, kidney deficiency deafness,tinnitus, blurred vision, night blindness, pain and soareness of the lumbar region, hot and cold sensation of the bones.
KID-1 , YONGQUAN
On the sole of foot between second and third metatarsal bones, approximately one third of the distance between the base of the second toe and the heel, inadepression formed when the foot is plantar flexed.
ခြေဖ၀ါးပေါ်ရှိ ခြေခုံရိုး နံပါတ် ၂ နှင့် ၃ကြားတွင် ရှိသည်။ အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့် ခြေဖနောင့်နှင့် ခြေဖ၀ါးထိပ်ပိုင်း အကွာအဝေး၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံခန့်တွင် ရှိပါသည်။ အလွယ်အားဖြင့် ခြေဖ၀ါးကော့လိုက်သောအခါတွင် ဖြစ်လာသောချိုင့်နေရာဟူ၍လည်း အကြမ်းမှတ်ယူနိုင်ပါသည်။
အပ်စိုက်ပုံ ။ ။ ၀.၅ နှင့် ၁ cun တည့်တည့်
အကျိုးပြုပုံ ။ ။ သတိမေ့နေသူများ၊ အတတ်ရောဂါရှိသူများ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ အသံမထွက်ခြင်း၊ နှာခေါင်းသွေးထွက်ခြင်း၊ ညဘက်အိပ်မပျော်ခြင်း၊ မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းခြင်း၊ ရူးသွပ်သူများ၊ ၀မ်းချုပ်သူများ၊ အသက်ရှုကျပ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါကြောင့် ရင်ဘက်အောင့်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ ခြေထောက်ကိုက်ခြင်း၊ ယောင်ခြင်း များကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။
Needling- perpendicular 0.5 to 1 cun
Action- Descends excess from the head, Calms the spirti, Revives consciousness and resuces yang.
Loss of consciousness, epilepsy, any kind of diziness,throat pain, loss of voice, nose bleeding, agitation, insomnia, poor memory madness, heart pain,cough, dyspnoes, constipation, lumbar pain,lower limb paralysis, chronic leg pain and swelling.
location- On the medial side of the foot, distal and inferior to the medial malleolus, in the depression distal and inferior to the navicular tuberosity. The midpoint between the ball of the foot and the heel.
Needling- Perpendicular insertion 0.5 to 1 cun.
Action- Clears deficiency heat, Regulates the kidney, Regulates the lower jiao
Indication- Throat pain obstruction, insufficient saliva, inability to speak, night sweating, coughing blood, protrusion of the tongue, stabbing heart pain, Itching of the genitals, nocturnal emissions, seminal emission, impotency, one foot hot and one foot cold, pain and swelling, restless feet.
ကေအိုင်ဒီ - ၂
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ခြေထောက်၏အတွင်းဘက်ရှိ ခြေမျက်စိ၏ အောက်ခြေနှင့် အတွင်းဘက်နားတွင် ရှိပါသည်။ ခြေမျက်စိအောက်ခြေရှိ navicular tuberosity ၏ အချိုင့်နေရာလေးတွင်ရှိသော အဆုံးအောက်ခြေနားတွင် ရှိပါသည်။
အကျိုးပြုပုံ ။ ။ ပန်းသေ ပန်းညိုးရောဂါ၊ လည်ပင်းနာခြင်း၊ လည်ပင်းနှင့်ပတ်သပ်သော ရောဂါအမျိုးမျိုး၊ ညဘက်ချွေးထွက်ခြင်း၊ ခြေထောက်နှင့်ပတ်သပ်သောရောဂါများတွင် သက်သာစေပါသည်။
location- In the depression between the medial malleolus and the Archilles Tendon, level with the prominence of the medial malleolus. In the center of depression, midway between the prominence of the medial malleolus and posterior border of Archilles tendon.
Actions- Nourishes kidney yin and clears deficiency heat,Tonifies Kidney yang, Anchors qi and benifits the Lung, Strengths the lumbar spine.
Indication- Deafness,tinnitus, Headache and dizziness,toothache,nosebleed,Insomnia,excessive dreaming, poor memory, stabbing heart pain,Frequent urination,impotency, seminal emission, lumbar pain, pain of abdomen and lateral costal region,coldness of lower limbs, swelling and pain of the ankle.
ကေအိုင်ဒီ - ၃
အာကီးလိစ် အရွတ်နှင့်ခြေထောက်အတွင်းဘက် ခြေမျက်စိကြားနှစ်ခု၏ အလယ်တွင် ပုံမှန်လူတိုင်းတွင် အချိုင့်လေး ရှိပါသည်။ ထိုအချိုင့်၏ အလယ်တည့်တည့်သည် ကေအိုင်ဒီ -၃ဖြစ်ပါသည်။
အပ်စိုက်ပုံ ။ ။ ၀.၅ cun အလျားလိုက်
အကျိုးပြုပုံ ။ ။ အသက်ရှုကျပ်ခြင်း၊ လျှာပူခြင်း၊ ဒေါသအလွယ်တကူထွက်ခြင်း၊ စိတ်မနှံ့ခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း၊ လည်ပင်းနှင့်ပတ်သပ်သော ရောဂါအချို့၊ ခြေထောက်ယောင်ခြင်း၊ ခြေထောက်နာခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ အလိုလိုကြောက်တတ်သော ရောဂါ၊ မပျော်ရွှင်မှုများသောသူ သို့မဟုတ် စိတ်ဓါတ်ကျသောသူ စသော လူများတွင် ကောင်းမွန်ပါသည်။
location- Approximately 0.5cun posterior to the midpoint of the line drawn between KID-3 and KID-5 on the anterior border of the Archilles Tendon.
Needling- Oblique-perpendicular insertion directed anteriorly 0.5cun.
Actions- Reinforces the Kidneys, Anchors the qi and benefits the Lung, Strengthens the will and dispels fear
Indications- Coughing blood,dyspnoea,shortness of breath,heat in the mouth, dry tongue,painful throat and swelling,palpitations,dementia, mental retardation, propensity to anger,fright, fear and unhappiness,Constipation with distended abdomen,diffcult in urination, dribbling and retention of urine, stiffness and pain of the lumbar region, pain and swelling of the heel.
ကေအိုင်ဒီ -၄ သည် ကေအိုင်ဒီ -၃ နှင့် ကေအိုင်ဒီ -၅ ကြား ၀.၅cun အကွာအဝေးခန့် အနောက်တွင် ရှိပါသည်။
အကျိုးပြုပုံ ။ ။ ကျောက်ကပ်နှင့်အဆုတ်ကို ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ စိတ်နှင့်ပတ်သပ်သော ရောဂါအချို့ကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။
location- 1 cun inferior to Taixi KID-3 inadepression anterior and superior to the calcaneal tuberosity( the site of insertion of the Achilles tendon into the calcaneum)
Needling- Oblique-perpendicular insertion directed away from the bone, 0.3 to 0.5 cun.
Actions- Regulates the penetrating and conception vessels and benefits menstruation.
Indications- Amenorrhoes, irregular menstruation, Dysmenorrhoes,delayed menstruation with oppression and pain below the Heart on onset of menstruation,Prolapse of the uterus,cloudy vision,abdominal pain,difficulty urination,dribbling urination.
ကေအိုင်ဒီ - ၅
ကေအိုင်ဒီ -၃ ၏ အပ်စိုက်အကွာအဝေး ၁ cun ခန့် နိမ့်သော နေရာတွင်ရှိသော အချိုင့်နေရာလေး ဖြစ်ပါသည်။
အပ်စိုက်ပုံ ။ ။ ၀.၃ နှင့် ၀.၅ cun အလျားလိုက်
အကျိုးပြုပုံ ။ ။ အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော အမျိုးသမီးရောဂါများ ၊ ကျားမများတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော ဆီးနှင့် ပတ်သပ်သော ရောဂါများကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။ မျက်စိကိုလည်း အမြင်ကြည်စေပါသည်။
Location- 1 cun below the prominence of the medial malleolus, in the groove formed by two ligamentous bundles. Lies between the tibialis posterior tendon anteriorly and the flexor digitorum longus tendon posteriorly.
Needling- Oblique insertion directed superiorly 0.3 to 0.5 cun.
Actions- Benefits the throat,Nourishes the Kidneys and clears deficiency heat,Regulates the Yin Motility vessel,Calms the spirit,Regulates the lower Jiao.
Indications- swelling and pain of the throat, redness and swelling of eyes,head wind,diziness,Insomnia, Frequent urination, enuresis,dribbling urination.
ကေအိုင်ဒီ - ၆
အတွင်းဘက် ခြေမျက်စိအောက်ဘက် အပ်စိုက်အတိုင်းအတာ ၁ cun အကွာမှာရှိသော အရာဖြစ်ပါသည်။
အပ်စိုက်ပုံ ။ ။ ၀.၃ မှ ၀.၅ cun အလျားလိုက်
အကျိုးပြုပုံ ။ ။ လည်ပင်းနာခြင်း၊ ယောင်ခြင်း၊ မျက်စိနီခြင်း ယောင်ခြင်း၊ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း၊ ညအိပ်မပျော်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်ခြင်း စသည်များကို သက်သာစေပါသည်။
location- Below the lateral aspect of the ribcage, anterir and inferior to the free end of the 12th rib. To locate the end of twelfth rib,first place the entire hand on the upper abdomen and with gentle finger pressure palpate downwards along the costal margin,until the end of eleventh rib is located just above the level of umblicus.
Needling-0.5 to 1 cun perpendicular insertion
Actions-Tonifies the kidneys and regulates the water passages, fortifies the spleen and regulates the intestines, strengthens the lumbar region.
ဂျီဘီ - ၂၅
နံရိုးအဆုံး၏ ဘေးဘက်အောက်နေရာ၊ အတိအကျပြောရလျင် နံရိုးနံပါတ် ၁၂ အောက်ရှိ လွတ်နေသော နေရာ။ နံရိုးနံပါတ် ၁၂ ကို ရှာဖွေရာတွင် ဗိုက်အပေါ်ပိုင်းကို လက်ဖ၀ါးတင်ပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်း လက်ချောင်းအားကို အသုံးပြုပြီး နံရိုး၏ အဆုံးဘက်ကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
နံရိုးနံပါတ် ၁၁ ၏အဆုံးသည် ချက်၏အပေါ်နားဝန်းကျင်တွင် ရှိသည်။
အပ်စိုက်ပုံ ။ ။ ၀.၅ မှ ၁ cun ဒေါင်လိုက်
အကျိုးပြုပုံ ။ ။ ကျောက်ကပ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ သရက်ရွက်နှင့် အူများကို အဟာရဖြစ်စေခြင်း၊ ခါးအရိုးများကို သန်မာစေခြင်း။
မှတ်ချက် ။ ။ ကျွမ်းကျင်သောဆရာဝန်၊ အပ်သေချာမကိုင်နိုင်သူဖြစ်လျင် အပ်ကို အသုံးမပြုရပါ။ နေကြာစေ့၏ထိပ်အချွန်၊ ဘောပန်အဖုံးနှင့်လည်း ထိုနေရာများကို ဖိပေးလျင်လည်း ရပါသည်။ ဆေးပညာနှင့်နီးစပ်သူများ သေချာဖတ်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ကို အင်္ဂလိပ်လိုတွင် ဖတ်နိုင်ပါသည်။
အတိုင်းအတာ ။ ။ ၁ cun ဟူသော အတိုင်းအတာကို မိမိအပ်စိုက်မည့်သူတစ်ယောက်၏ လက်မအကျယ်နှင့်တိုင်းပါသည်။
Note. What we mention ,especially refer to those who are closely related to medical field. If you are not related in medical field, you should not do acupunture with needles but do with sunflower seeds or tip of the pen cap.
Measurement. 1 cun is recognized as the width of the thumb of individual.